01.03 Manasitrana Jeso Kristy
Anio Alakamisy 01 Marsa 2018 dia ny Lioka 8.40-56, no teny hovakiantsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra alain-tahaka na tsy tokony hatao ?
40 Ary nony tafaverina Jeso, dia nandray Azy tsara ny vahoaka, fa niandry Azy avokoa izy rehetra.
41 Ary, indro, dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny synagoga; dia niankohoka tamin’ ny tongotr’ i Jeso izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony.
42 Fa nanana zanakavavy tokana tokony ho roa ambin’ ny folo taona izy, ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jeso, dia nanety lalana Azy ny vahoaka.
43 Ary nisy vehivavy anankiray narary roa ambin’ ny folo taona, izay efa nandany ny fananany rehetra tamin’ ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory.
44 Dia nankao ivohon’ i Jeso ravehivavy ka nanendry ny somotr' aviavin-dambany, ary niaraka tamin’ izay dia nijanona ny aretiny.
45 Ary hoy Jeso : Iza moa no nanendry Ahy ? Ary rehefa samy nandà izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany : Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina Anao.
46 Fa hoy Jeso : Nisy olona nanendry Ahy; fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko.
47 Ary rehefa hitan-dravehivavy fa tsy takona Azy izy, dia nangovitra izy ka nankeo aminy sady niankohoka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehan’ ny vahoaka rehetra izay anton’ ny nanendreny Azy sy izay nahasitranany niaraka tamin’ izay.
48 Ary hoy Jeso taminy : Anaka, ny finoanao no nahasitrana anao; mandehana soa aman-tsara.
49 Ary raha mbola niteny Jeso, dia tonga ny anankiray avy tany amin’ ilay mpanapaka ny synagoga ka nanao hoe : Maty ny zanakao-vavy; aza manahirana ny Mpampianatra.
50 Fa Jeso, raha nahare, dia namaly azy ka nanao hoe : Aza matahotra; minoa fotsiny ihany, dia ho velona izy.
51 Ary raha tonga tao an-trano Izy, dia tsy nisy olona navelany hiara-miditra taminy, afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mbamin’ ny ray aman-drenin-drazazavavy.
52 Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy; fa Jeso nanao hoe : Aza mitomany; fa tsy maty izy, fa matory.
54 Ary Jeso dia nandray ny tanany ka niantso hoe : Ry zazavavy, miarena.
55 Dia nody indray ny ainy, ka niarina niaraka tamin’ izay izy; ary nasainy nomena hanina izy.
56 Ary dia talanjona ny ray aman-dreniny; fa Jeso nandrara azy tsy hilazalaza amin’ olona ny zavatra efa natao.
MANASITRANA JESO KRISTY
Jeso dia Mpanasitrana ny marary.
Maro ny olona nifanety sy nifampikasokasoka tamin’i Jeso fa hafa mihitsy ny an’itý ravehivavy izay efa narary nandritra ny 12 taona itý, efa lany vola tetsy sy teroa nefa tsy nety sitrana. " Fa hoy izy : Na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko, dia ho sitrana aho. " (Marka 5.28)
Ka raha vao nikitika ny sombin-damban’i Jeso fotsiny ravehivavy dia sitrana avy hatrany. Nanana finoana lehibe izy.
I Jeso dia nahatsapa fa nisy hery niala tao aminy ary tsapan’i Jeso izany finoany izany.
"Ary hoy Jeso taminy : Anaka, ny finoanao no nahasitrana anao; mandehana soa aman-tsara." (48).
Raha mbola tsy nangataka mivantana taminy akory aza ravehivavy dia sitrana.
Teto dia tian’i Jeso nampahafantarina ny olona ny Fahagagana izay niseho ka nanontany ampahibemaso Izy (45).
Ilaina ny MIJORO vavolombelona rehefa nanao fahagagana teo amin’ny fiainantsika Jeso Kristy.
Jeso koa dia mahay manangana ny maty.
Raha nahare ny vaovao nampalahelo momba ny fahafatesan’i zanak’i Jairo dia hoy Izy : " Aza matahotra; minoa fotsiny ihany, dia ho velona izy." (50).
Amin’Andriamanitra ny olona efa tsy misy fofon’aina intsony dia matory fotsiny.
Hita eto fa ny Tompotsika dia tsy mijery fotsiny ny fahoriana izay manjò antsika, ka ho an’izay olona manantona Azy sy mino Azy ary mahatoky Azy dia tonga Izy mitondra famonjena. Tsy ilaina ny tahotra sy ny tsy finona na ny fihomehezana tahaka ny nataon’ireto olona efa nisaona ireto (53).
Raha mandalo fitsapana mafy ianao izao na aretina na fahoriana,
isan’ireo mino an’i Jeso ve ianao fa manasitrana sy mamonjy anao Izy ?